Christopher Wambua oo si ku meel gaar ah u sii haynayo xilka Ezekiel Mutua | Star FM
Home Wararka Kenya Christopher Wambua oo si ku meel gaar ah u sii haynayo xilka...
Christopher Wambua oo si ku meel gaar ah u sii haynayo xilka Ezekiel Mutua
Ezekiel Mutua ayay wararku sheegayaan in laga qaaday madaxa fulinta ee guddiga dowladda dhexe u qaabilsan taya-dhowrka aflaanta ee (KFCB) ka dib lix sanno oo uu xafiiska joogay.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in mr Mutua loo diray “fasaxa hawlgabnimo” taas oo ku timid sabab la’aan.
Christopher Wambua oo ka socda Maamulka Isgaarsiinta ee dalka ayaa si ku meel gaar ah loogu magacaabay xilkani.
Ezekiel Mutua ayaa xalay beeniyay in xilkaasi laga qaaday isaga oo sheegay inuu ka war qabin arrimo noocaasi ah.
Waxaa uu ka jawaabayay qoraal uu soo daabacay seneterka ismaamulka Makueni Mutula Kilonzo Jnr kaas oo ahaa in si sharci darro ah xilka looga xayuubiyay madaxa fulinta ee guddiga dowladda dhexe u qaabilsan taya-dhowrka aflaanta ee (KFCB).
Previous articleCiidamada AMISOM ee Soomaaliya oo la siiyay gaadiid loogu talagalay amniga doorashooyinka dalkaasi
Next articleXaalada Corona Virus ee Garissa oo walaac laga muujinaya